Soosaarayaasha Dhalada Kiniinka - Warshadda Dhalada Kiniiniga Shiinaha & Alaab-qeybiyeyaasha
• Waxaan ku bixinaa adeegga presales qaabab kala duwan, tusaale ahaan, naqshadeynta naqshadeynta iyo caaryada furan ee alaabta iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha, waxaan u siineynaa Logo Daabacaadda sida macaamiisha looga baahan yahay, iwm.
• U dir macaamiisha tixraac ahaan
• Miisaaniyadda maalgelinta: Waxaan bixinnaa adeegyo falanqeyn faa'iido wax soo saar ah, talobixinta wax soo saarka iyo miisaaniyadda la xiriirta.
Dhalooyinka Kaabsal Caagga ah ee qaababka dibedda ee dhalooyinka HDPE-da ee caafimaadku waa wareegsan yihiin, afargeesle iyo oval yihiin. Codsiga jirka dhalada wareegsan ayaa ah tan ugu weyn, gaar ahaan jirka dhalada oo leh awood 15ml ilaa 200ml. Waxaa lagu gartaa dhumucda derbiga isku midka ah, awoodda sare ee lagu nuugo tamarta saameynta dibedda, qiimaha wax soo saarka hooseeya, iyo heerka isticmaalka hooseeya ee aagga waxtarka leh inta lagu jiro keydinta ama gaadiidka. Dhalada laba jibbaaran waxay leedahay heer isticmaalkeedu sarreeyo oo ah aag wax ku ool ah iyo xasillooni wanaagsan, laakiin waxay u nugul tahay isbeddellada ku soo booda.
Heerka tayada ee dhalada balaastigga ah. Ka samee falanqaynta tayada wax soo saarka heerarka tayada wax soo saarka soo saaraha si loo go'aamiyo inay suurad wacan tahay iyo in kale. Shirkadaha dhalada balaastigga ee dawooyinka sameeya waa inay dejiyaan heerarka ganacsi ee ka sareeya heerarka qaranka, iyo heerarka warshaduhu inay noqdaan kuwa aad u adag;
Dhalooyinka balaastikada ah ee PET waxay fadhiyaan meel muhiim ah oo suuq ah oo ku dhow suuq kasta oo baakadaha wax lagu rito. Tani dabiici ahaan lagama sooci karo faa'iidooyinka dhalooyinka caaga ah ee PET. Ugu horreyntii, xasilloonida walxaha caagga ah ee xayawaanku way fiican tahay, iska caabinta heerkulka, heerkul gaar ah si loo ilaaliyo xasilloonida maaddada, gaar ahaan ku habboon baakadaha cuntada. Marka labaad, dhalooyinka caaga ah ee xayawaanku waa kuwo hufan oo leh muuqaal la mid ah dhalooyinka quraaradaha ah, laakiin way ka fudud yihiin oo aad bay u jilicsan yihiin.
Kaabsal PET Blue
Baakadaha go'doomin sarreeya Baakadaha go'doominta sare waa adeegsiga agabyada leh go'doomin aad u fiican si loo xakameeyo gaaska iyo uumiga biyaha. Ur, iftiin, iwm xirmada si loo hubiyo waxtarka daroogada. Baakadaha go'doominta sare ayaa si ballaaran looga isticmaalay Yurub iyo Japan. Si kastaba ha noqotee, Shiinaha ayaa soo bandhigtay PVDC iyo xirmooyinka kale ee go'doominta sare ilaa 1980s, laakiin koritaankiisu wuu gaabis yahay. Sidaa darteed, koritaanka baakadaha maaddada go'doominta sare waa isbeddel weyn oo ka mid ah baakadaha dabacsan ee Shiinaha;
Tayada muuqaalka dhalada caaga ah ee caafimaadka: dhalada caafimaad ee afka adag guud ahaan waa cadaan. Dhalada daawada dareeraha ah ee afka guud ahaan waa bunni ama hufan, iyo waxyaabo kale oo midab leh ayaa la soo saari karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha. Midabku waa inuu ahaadaa mid isku mid ah, oo aan lahayn kala duwanaansho midab muuqda. Dusha sare waa inuu ahaadaa mid siman oo siman, oo aan lahayn cillad iyo xoqitaan muuqda, godadka ciidda, Wasaqda saliidda iyo goobooyin. Afka dhalada waa inuu ahaadaa mid jilicsan oo jilicsan.
Xaqiiqdii, badbaadada dhalooyinka PET ayaan lagala sooci karin faa'iidooyinka dhalooyinka caaga ah ee PET. Midka hore ayaa ah in dhalooyinka caaga ah ee PET ay yihiin kuwo miisaankoodu fududyahay kuna adkaystay maadada. Midda labaad ayaa ah in dhalooyinka caaga ah ee PET ay qiimo jaban yihiin. Marka la barbardhigo dhalooyinka iyo baakadaha dhoobada, qiimaha dhalooyinka caaga ah ee PET aad ayuu uga hooseeyaa. Midda saddexaad, dhalooyinka PET waxay leeyihiin heer dib-u-warshadayn sare, oo aad uga sarreeya dhalooyinka kale ee caagga ah, ee ku habboon nabadgelyada deegaanka.